नेपालको झन्डा जस्तै : तयार भयो नेपालको रेलको डिब्बा ! – Life Nepali
नेपालको झन्डा जस्तै : तयार भयो नेपालको रेलको डिब्बा !
भारतको चेन्नइस्थित कोंकोण रेलको कारखानामा बन्दै गरेको नेपालको रेलको डिब्बा करिब तयार भएको छ । रेल विभागले जनकपुर–जयनगर ३५ किलोमिटर लामो रुटमा चलाइने भनिएको दुई वटा रेलका डिब्बा निर्माणबारे प्रगति बुझ्न नेपाली पक्ष सोमबार भारत पुगेको छ । रेल विभागले जनकपुर–जयनगर रुटमा चलाउने रेल तयार भइसकेको छ । ३५ किलोमिटर लामो उक्त रुटमा चलाइने भनिएको दुई वटा रेलका डिब्बा निर्माणबारे प्रगति बुझ्न नेपाली पक्ष सोमबार भारत पुगेको हो ।
भारतको चेन्नइस्थित कोंकोण रेलको कारखानामा बन्दै गरेको रेल निरीक्षणका लागि विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रसहितको नेपाली टोली पुगेको हो । डिजेल इञ्जिन भएको ‘डिइएमयु’ रेलमा ५ वटा डिब्बा रहने छन् । विभागले ८४ करोड ६५ लाख रूपैयाँमा भारतीय कम्पनीमार्फत रेल खरिद गर्न लागेको हो । गत वर्ष भएको सम्झौताअनुसार जनवरी मध्यसम्म भारतीय पक्षले रेल निर्माण गर्नेछ ।
रेल बनिसके पनि फिटिङका काम भइरहेको र सम्भवतः माघ वा फागुनतिर आइपुग्ने विभाग श्रोत बताउँछ । तर यसअघि पनि पटक-पटक रेल चलाउने मिति सर्दै आएको छ । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र र प्राविधिकसहितको टोली शुक्रबारसम्म फर्किने कार्यक्रम छ । रेल आए पनि चलाउने जनशक्तिबारे नेपाली पक्ष अझै स्पष्ट छैन । रेल नियमावली लोकसेवा आयोगमा अड्केको छ भने रेल चलाउन आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति भारतबाटै आउनेछ । जनशक्तिको पूर्ति तत्कालका लागि विभागका कर्मचारीबाटै गराउने तयारी छ ।-रासस
Previous नेपाली सेनाले माग्यो नर्सदेखि शिक्षकसम्म विज्ञापनसहित
Next श्वेताले बनाइन चिटिक्क झ्याडी बस्ती : नयाँ घर सरे भूकम्पपीडित !